Kunezindlela ezimbalwa ongasiza ngazo ekuthuthukiseni leli khasi
Izinhla zokuhlola izinyoni: Ngisebenza ngokuqhubekayo kwedatha yokusabalalisa. Uma unezilungiso noma izengezo zokwenza ohlwini lokuhlola olukhona, noma uhlu lokuhlola lwesifunda esisha olungakaze luhlanganiswe, ngingathanda ukuzwa kusuka kuwe.
I-database yomlando wokuphila: Enye yokuhlanganisa okulandelayo ekhasini kuzoba ulwazi mayelana nomlando wokuphila kwezinyoni. Ngiye ngaqala ukuqoqa ulwazi ngobuningi be-clutch, isikhathi sokufakwa kwesikhala, amazinga okusinda, njll, ikakhulukazi izinyoni zaseNyakatho Melika, kodwa kusekhona indlela ende yokuhamba kuzo zonke izinhlobo zezinyoni. Noma yiluphi ulwazi olungayinikeza mayelana nomlando wokuphila luzokwaziswa kakhulu.
Ukuhumusha: Le sayithi isivele itholakale ngezilimi eziningana, futhi nginesithakazelo njalo ukwengeza okusha. Uma unesithakazelo sokunikeza inguqulo entsha, ngingakuthumela ifayela le-Excel equkethe umbhalo walesi sayithi (cishe ngamazwi angu-6000). Ngiphinde ngibheka njalo izinyoni ezifanisayo kwezinye izilimi.
Ngithanda ukubonga wonke umuntu oye wangisiza ukwakha i-Avibase eminyakeni edlule. Nakuba ngenze konke okusemandleni ukufaka amagama abo bonke abangisize ohlwini olungezansi, ngiyaxolisa kusengaphambili kunoma ngubani engikhohliwe. Ngizokwengeza ngenjabulo igama lakho uma uxhumana nami. Ngakolunye uhlangothi uma, nganoma yisiphi isizathu, ukhetha ukuthi igama lakho aliveli kulolu hlu, sicela ungitshele futhi.
* kubonisa umnikelo okhethekile owanikeze ulwazi oluningi
I-Avibase ivakashelwe 309,917,704 izikhathi kusukela mhla zingama-24 kuJuni 2003. © Denis Lepage | Inqubomgomo yobumfihlo